China FURUKAWA HB1200 တူးဖော်သောဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် Hydraulic Breaker Seal Kit Hammer | Monteono
MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 ဟိုက်ဒရောလစ်ကျောက်ဆိုင်း ...
FURUKAWA HB1200 ဟိုက်ဒရောလစ် Breaker Seal Kit Hammerf...
PC210 EX200 ဟိုက်ဒရောလစ်တူအပေါက်ဖောက်စက် ...
အားလုံးမော်ဒယ်များအရည်အသွေးကောင်းတံဆိပ်ခတ် O-Ring ကိုဟိုက်ဒရောလစ် Pum ...
လမ်းသုံးစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ အကြမ်းခံ။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများ ...
excavator ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ FURUKAWA HB1200 Hydraulic Breaker Seal Kit Hammer
အနက်၊ အပြာ၊ အဝါရောင်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုအရ
တစ်လလျှင် 10000 သတ်မှတ်မည် / သတ်မှတ်မည်
Seal Kits Inner သည်သွပ်သွင်းထားသောစက္ကူဖြစ်ပြီး၊ အပြင်ဘက်တွင် cusromer ၏လိုအပ်ချက်အရထုပ်ထားသောအဖုံးနှင့်အတူပုံးတစ်ထည်ဖြစ်သည်
အရေအတွက် (သတ်မှတ်ချက်များ) 1 - 500 > 500
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 15 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
နာမည်: FURUKAWA HB1200 တူးဖော်သောဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်အတွက်ဟိုက်ဒရောလစ်အားအနိုင်အထက်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
ပုံစံ: SH200, SH400, SH700, SH18G, SH20G, SH30G, SH35G, SH40G, SB30, SB35, SB40, SB43, SB45, SB50,
အလေးချိန် - 0.05-0.5KG / set
ပစ္စည်း: NBR / HNBR / FKM / VITON / PTFE / PU / PA / IRON တွင် PU လက်စွပ်လည်းရှိသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀ သတ်မှတ်ထားသည်
DOUBLE BULL, TOKU, DAEMO, COMET, HANMA, MSB, အထွေထွေချိုးဖောက်သူ၊ EVERDIGM၊ SEHAN DAHE, HT-TECH, HENYAK, TOYO, OKADA, MSB, EDT
SB70, SB81, SB81N, SB100, SB121, SB130, SB151, SH200, SH400, SH700, SH18G, SH20G, SH30G, SH35G, SH40G, SB30, SB35, SB40, SB43, SB50, SB60, SB60
MB500, MB700 / 800, MB1000, MB1200, MB1500, MB1700, HB2000, HB2200, HB2500, HB3000, HB4200, TEX75 / 80 / 100H / HS, TEX110H / HS, TEX180H / HS, TEX200H6, TEX250H1, TEX450H1, TEX400H1 700 / 900H / HS, TEX1400H / HS
HM45, HM50 / 55, HM60 / 75, HM85, HM130 / 135, HM170 / 185, HM200, HM300 / 301/305, HM400 / 401, HM550 / 560CS, HM580, HM600 / 601, HM700 / 702/705, HM710 / 605 720CS, HM800, HM900 / 901/902, HM950 / 960CS, HM1200, HM1300 / 1500CS, HM1800 / 2000CS, HM2200 / 25
၁။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်။
5. ပံ့ပိုးမှု OEM / ODM အမိန့်။
7. ပြီးပြည့်စုံသောပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက် Email, Wechat, Tel သို့မဟုတ် Skype မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုပြောပါ။ သင်၏လိုအပ်ချက်အရကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မည်။
သင်အတည်ပြုပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည် PI ကိုငွေပေးချေပါမည်။
အမှာစာအတွက် DHL, FEDEX, UPS, TNT.etc ကဲ့သို့အမြန်ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးမည်
T / T၊ PAYPAL၊ အနောက်တိုင်းပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ် L / Cas ပုံမှန်၊ ၃၀% ကြိုတင်ပေးငွေကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Ivy Zhang ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရှေ့သို့ Daemo DMB450 Hydraulic Hammer Seal Kit
နောက်တစ်ခု: အထွေထွေအနိုင်အထက်အတွင်းပိုင်းဘုရှ်အတွက်တရုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်အပေါက် Hammer အထက်ဘုရှ် GB11t GB8at အတွက် PriceList
Hush အစိတ်အပိုင်းများအတွင်းပိုင်းချုံ soosan S က ...
ထိပ်တန်းအမျိုးအစား HB40G ဟိုက်ဒရောလစ်အပေါက်အတွက် ...
စက်ရုံ DYB600 42crmo Hydraulic B ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချသည်။
Flat Type Stanley656 Hydraulic Breaker Hammer P ...
SOOSAN SB70 တူးဖော်စက်၏ရှေ့ဖုံး ...
တိတ်ဆိတ်သောကျောက်တုံးအကာအရံ HB30G FURUKAWA hy ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားသော၊ အမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာသည်။
အခန်း 1705, Block B, JINYE အဆောက်အ ဦး, NO ။ 282 ZHUHE လမ်း HANSHAN ခရိုင်, HANDAN CITY, Hebei